यात्रु दोषी कि ल्याब ? नेपालमा कोरोना नेगेटिभ, विदेश पुगेपछि पोजेटिभ – Mission Khabar
यात्रु दोषी कि ल्याब ? नेपालमा कोरोना नेगेटिभ, विदेश पुगेपछि पोजेटिभ
मिसन खबर २० कार्तिक २०७७, बिहीबार ०७:२४
नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता हङकङ, दुबई, नारिता (जापान)लगायत गन्तब्यमा नेपालबाट पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर गएका यात्रुमा सम्बन्धित गन्तब्यमा पुगेपछि कोरोना पोजेटिभ नतिजा आएको छ । कोभिड संक्रमित ल्याएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्समाथी हङकङले दोस्रोपटक प्रतिवन्ध लगाएको छ । दुबई र नारिता विमानस्थलबाट समेत चेतावनीसहित प्रोटोकल सूचीको सामना गर्नुपरेको छ । सो प्राटोकल पालना नगरी यात्रु सम्बन्धित मुलुक पुगेमा त्यसको दोष एयरलाइन्सले लिनुपर्नेछ ।
यसरी आउने कोरोना जाँचको रिपोर्टले एयरलाइन्सले प्रतिवन्धको सामना गर्नुपर्दा आर्थिक र प्रतिष्ठानमा समेत आँच आउन लागेको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्सले उडान गर्ने गन्तब्यमा पछिल्लो ७२ घण्टायताको नेगेटिभ पीसीआर रिर्पोट भएमा यात्रा गर्न सकिने प्रावधान छ । तर नेपालको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट बोकेका यात्रु विदेश पुगेपछि पोजेटिभ देखिनुमा यात्रुको असावधानी हो वा ल्याबको लापरबाही यसबारे सरकारले वास्तविकता पत्ता लगाउनु आवश्यक छ ।
अब नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलबाट जहाज चढ्दा पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट बुझाएर उडेका यात्रुमा गन्तब्यमा पुगेपछि पोजेटिभ देखिए उडान कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने भएका छन् । यसरी एयरलाइन्सले हात झिक्दा यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी यात्रु स्वयमले लिनुपर्ने भएको छ ।